पुदिनाको दिनहुँ सेवनले मिल्ने छ यस्ता अचुक फाईदा - पुरा पढ्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
यो श्वासको दुर्गन्ध हटाउने लोकप्रिय माउथ फ्रेसनर हो, जसलाई वैज्ञानिक भाषामा मेन्था भनिन्छ । दुई दर्जन जात र सयांै प्रकार हुने पुदीनालाई सयौंवर्षदेखि जडिबुटीका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । पुदीनालाई प्रयोग गरेर टुथपेष्ट, चुईङगम, क्यान्डी, इन्हेलरजस्ता औषधिमा प्रयोग गरिन्छ ।
Don't Miss it तामाको भाँडो प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यस्ता तरिकाले राखेकाे तामाकाे भाँडाेमा पानी पिउँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ?
Up Next उत्तर सिरान पारेर यसकारण सुत्न हुदैन